Guitar lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ny fahaizana milalao ny gitara dia hahatonga anao malaza. Mba hifehy fitaovana ity, dia afaka hamita ny mozika sekoly na antokony manokana, ary na dia milalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Guitar, izay ny zavatra rehetra dia omena, toy ny eo amin'ny fiainana. Misy mozika, ary ny kofehy no niova fo ho amin'ny fitendry fanalahidy. Ny lesona dia tsotra sy manahirana kokoa ny fahazoan-dalana hanao fanazaran-tena malaza motifs, ary avy eo dia nanoratra azy ireny mba nihaino taty aoriana. Raha mahafa-po ny vokany, mametraka ny fifehezan 'ny blaogy sy manasa ny namana mba hanombanana ny ezaka mozika. Ary afaka mamita manodidina fotsiny, nefa mandany vola be amin'ny toetra amam-panahy tao an-gitara milalao.
Lalao Guitar tamin'ny Category:
Adventure ho an'ny ankizilahy
Ny tsara indrindra Guitar lalao
Ny manam-pahaizana ny gitara
Music Machine: ny pianô, gitara sy ny amponga
Mena sy mainty gitara
Ny virtoaly vondrona
Hanorina gitara ny nofy
A mpankafy gitara
Virtual Classic Guitar
Rock Star Mpanonofy
Mahery fo YouTube Blitz
Ny lalana mankany amin 'lazan'i 2
Beautiful mpitendry gitara
Ny Mpanjakan'ny Air Guitar
Dress ny mpanakanto
Mr. Mackey Guitar Legend
Beavis sy Batheta hira miaraka amin'ny gitara
Music manodidina antsika
Funny mpitendry gitara
Hero mpitendry gitara 2
Firenena Guitar Girl
Laharam-be Sesame: Monster mozika
Kiss vatolampy kintana
Bob - Guitar Hero
Ny gitara Halloween
Raha tianao ny hahafantatra gitara
Very isa 3
Dress ny Jenny
Mpamorona ny Guitar 1.
Pirenena, Kintan'ny Rock
Tutorial amin'ny gitara ho an'ny beginners
Farany Guitar lalao
Ny fianarana ny milalao gitara izao azo atao eo amin'ny fitendry solosaina
Lalao Online Rehetra Guitar lalao an-tserasera
Guitar – mpiara-mitory fanantenana, nofy, amam-panahin'ireo
Ny gitara Tsy voaongotra fitaovana fotsiny, miely patrana indrindra eo amin'izao tontolo izao. Mpiara-mitory sy ny tantaram-pitiavana ity hira kanto mpihira, naman'i Gypsy, nihira kalokalo sy vatolampy mozika, niantso noho ny fanampian'ny chords helo. Ny gitara no mifandray foana amin'ny Nitsangantsangana mpihira sy ny bards. Mahatonga ny olona mitaraina sy nihomehy sy nandihy sy hisaona aminy. Ireo izay indray mandeha dia nitoby amin'ny fizahan-tany lay, ary ny orinasa dia lehilahy izay mahafantatra ny fomba hitendry ny gitara, dia fantatrareo fa ny zavatra toy izany na oviana na oviana hadino. Rehefa lehibe ka tonga any amin'ny tsipika fahatongavana ny fiainany, ny olona mahatsiaro-pitiavana ny toe-javatra mampihetsi-po indrindra sy mora bust gitara afaka mahatsiaro ny fotoana lava be taona fampanantenana tanora, toa mora ny zavatra rehetra, ary ho mivaky loha. Ary raha nipetraka teo akaikin'ny afo amin'ny namana tsara, dia mihira hira gitara ny tanora, nanofy ny ho avy, manao drafitra, dia nihomehy fo ary tsy mieritreritra momba ny zava-tsarotra sy ny fahoriana, izay dia tsy maintsy miatrika. Ny gitara no vavolombelona ny nitsambikimbikina hehy sy ny hira.
dia ho afaka ny milalao azy isan-
ny fahafahana hilalao fitaovana io no mendri-piderana. Na dia tsy matihanina sy marina namely ny kofehy ny vitsivitsy chords ambany izay afaka mihira na miray feo izany manandratra anao eo imason'ny namany. Ny gitara dia tsy ho foana na inona na inona atao hoe fitaovana, satria ny ankamaroan'ny olona dia hianatra ny fototry ny ny lalao eo amboniny. Kely ny faharetana sy ny tsara obstinacy, ary ianareo dia hianatra ny tsotra sangan 'asa. Ary raha tsy mandalo Potika Be, ny fahaiza-manao voalohany dia hanampy mba hianatra Hira fiderana toerana tena fatorana sy mizara tena mpitendry gitara.
Inona no ho ny fitaovana, no fidinao:
izany ihany ny fototra karazany, fa hafa karazana, na ny marimarina kokoa zana-karazany. Ireo izay nanatrika ny mozika gitara kilasin'ny sekoly mahalala fa mizara:
Amin'ny fomba hakana feo izany ,
Ny isan-karazany ny feo
Ny fanorenana ny ny trano
Ny fisian'ny frets sy ny toerana niaviany
ampiasaina ao ny vokatra (Solo na gadona gitara)
Ny isan'ny toetra tady sy ny hafa
Games Guitar – Ny mpampianatra an-tserasera
Indrisy anefa, tsy misy zavatra mora vidy, ary tsy ny rehetra manam-bola, mividy fitaovana lafo vidy. Atolotsika-tserasera hilalao lalao gitara sy handray ny dingana voalohany eo amin'ny lalana marina, raha mijery ny Tutorials izay manome anao ny tranonkala toerana. Asehoy amin'ny lalao video be dia be ny fitaovana isan-karazany misy azo atao, ary tsy ilaina, satria akaiky kokoa isika Acoustic sy herinaratra, gitara. Raha tsy handeha haka lesona virtoaly, dia afaka fotsiny Mahafinaritra amin'ny Flash kilalao, izay miseho ny gitara niaraka tamin'ny fitaovana hafa. Tratra tao amin'ny Ensemble, Mivoaka eo amin'ny sehatra, ary ny mpihaino no miandry ny karama zava-bitany. Tsirairay ao amin'ny tarika sy milalao tonga ny anjara, ary rehefa tonga ny anjara, tsy maintsy hampidirana tsara ho any amin'ny ankapobeny fiderana sy milalao ny anjara. Tsy mitaky fahaiza-manao manan-danja tady busting fotoana rehefa ho any amin'ny zava-misy.
Te hanao zavatra irery, ianao, dia hahita ny tenanao indray teo amin'ny lampihazo, fa ny andraikitra noho ny hatsaran'ny ny lalao lainga aminao ihany. Fa afaka mandamina ny tena fifaninanana ao amin'ny vatolampy ny fampisehoana, ka manaiky ny zava-tsarotra hafa mpitendry gitara. Dia karazana mozika duel sy ny mpandresy dia hahazo ny tsara mendrika Ravintsara. Tamin'izany fotoana izany, toy ny mpamily ny fiara Tuning, nomeny ny tarehin'ny « vatomamy », mozika tsy latsa-danja mora ny fitaovana. Ao amin'ny iray amin'ireo lalao misy manasa anao handany Tuning ny gitara, mahatonga azy ho tsy manam-paharoa sy hafahafa. Interesting? Avy eo miroso amin 'ny fomba tsy misy hataka andro.